FANDAHARANA FOTOAM-BITA : Nanamafy ny hisian’ny fifidianana demokratika ny Filoham-pirenena
Niompana tamin’ny fiatrehana ny fifidianana Filoham-pirenena amin’ny taona 2018 indray no nitondran’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina fanazavana tao anatin’ilay fandaharana “fotoam-bita”, izay nivoaka ny faran’ny herinandro lasa teo. 14 novembre 2017
Nataony tonga aloha ny azy ny amin’ny mety hisian’ny ahiahy eo amin’ny vahoaka, eo anatrehan’ny fanahian’ny maro amin’ny tsy hahatanteraka ny fifidianana ho mangarahara sy eken’ny rehetra.
“Hamafisiko fa fifidianana ara-demokratika tanteraka no omanina mba tsy ho sanatria fifandonana sy herisetra tahaka ny any amin’ny firenen-kafa no hitranga eto amintsika”, hoy ny ampahany tamin’ireo voalazan’ny Filoham-pirenena tao anatin’ny fandaharana. Ankoatra izay dia mbola nohamafisiny ihany koa ny tokony handinihana ny andininy manahirana ao amin’ny lalàmpanorenana ankehitriny izay efa nahabe resaka ny antoko sy mpanao politika sy ireo fiarahamonim-pirenena isan-tokony.
Tamin’izany dia mbola niantso ny hisian’ny ady hevitra malalaka hatrany ny tenany tahaka izay efa nataon’ny teo aloha mahakasika io andininy vitsivisy tian’ny fitondram-panjakana hasiam-panitsiana io. Mbola voaresaka tao anatin’ity fandaharana Fotoam-bita andiany faha-28 ity hatrany ny mahakasika ny fanomezana fahefana feno ny sefo Fokontany na dia efa maro aza ireo niteny fa tsy laharam-pahamehana velively izany. Anisany nitondrany teny ihany koa ny vahaolana hoentina hanafoanana ny hosoka sy mety hisian’ny hala-bato miaraka amin’ny fanitsiana ny fitondran-tenan’ireo mpisehatra ao anatin’ny tontolon’ity fifidianana izay hokarakaraina ity.
Dia andrasan’ny rehetra indray araka izany ny fahantanterahan’ireo rehetra ireo mba tsy ho lasa ronono an-tavy fotsiny indray.